कानुन नमान्ने मेडिकल कलेज सरकार आफैंले किन सञ्चालन गर्दैन ! - Shiksha Sansar
कानुन नमान्ने मेडिकल कलेज सरकार आफैंले किन सञ्चालन गर्दैन !
काठमाडौँ । यति बेला निजी क्षेत्रबाट मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने केही मेडिकल कलेज सञ्चालकले नियम कानुनभन्दा आफू माथि भएको महसुस गरिरहेका छन्। सरकारले पटक–पटक मेडिकल कलेजमा अवैध असुलिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न म्याद दिँदासमेत अटेर गर्दै आउनु र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीलाई लक्षित गरी बढी शुल्क लिएकै हो फिर्ता गर्नुपरे मन्त्री नै हटाइदिन्छौँ भन्ने धम्की दिए। यो भाषाले पनि केही सञ्चालक राजनैतिक दलको आरक्षणमा रहेर कानुन लत्याउँदै छन् भन्ने स्पष्टै देखिन्छ।
यिनै समसामयिक विषयलाई लिएर युवा चिकित्सक संघले नेपाल सरकारको निर्देशन अवज्ञा गर्ने ४ वटा मेडिकल कलेजको सम्बन्धन तत्कालै खारेज गर्न माग गरेको छ। संघले युनिभर्सल मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज र नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्याक्ष डा। श्रीकृष्ण गिरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
यता आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काउन्सिलको अध्यक्षमा वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा। भगवान् कोइरालालाई तोकेको छ। डा। कोइरालालाई आउँदा आउँदै चुनौतीको संघार आएको छ। यता सरकारले अन्य पदमा अझै पदाधिकारी तोकेको छैन। काउन्सिलमा ५ जना सदस्य र रजिस्ट्रार पदसमेत खाली रहेको अवस्था छ।
कानुन कागजमा मात्र बनाउने नभई कार्यान्वयन कसरी गर्ने र कति अवधिमा गर्ने नगर्नेलाई के–कस्तो कानुनी सजाय दिने हो त्यो पनि व्यावहारिक हुनुले राज्यलाई बलियो बनाउँछ। राज्य आफैं कानुन बनाउने र कुनै दल गुट निकटका व्यक्तिलाई जे पनि गर्न छुट दिँदै जाने हो भने कानुनको पालना कसरी हुन्छ रु कानुन ठूला, साना सबैका लागि समानरूपमा लागू गर्नेतर्फ सरकार कटिबद्ध भएर लागोस्।
आन्दोलन चलिरहँदा र कलेज सञ्चालकले आतंकित बनाइरहेका बेला परीक्षामा सहभागी हुने वातावरण नै नरहेको विद्यार्थी बताउँछन्। उनीहरूको परीक्षा २१ कात्तिकदेखि हुँदै छ। कलेज सञ्चालकको धम्की र दबाबपछि विद्यार्थी थप चिन्तित र आक्रोशित भएका छन्। नेपाल समाचारपत्रबाट साभार
काठमाडौँकी सङ्क्रमित महिला चन्द्रागिरी नगरपालिका निवासी
शिक्षामा बजेट वृद्धिको माग
२४ घन्टामै देखिए कोरोनाका ८३ नयाँ संक्रमित